Kakuun bara kanaa maaf akkana bushooftee/ rakastee? - Gaachana Sabaa
September 9, 2017 October 5, 2017 Biyyaan Boon Lammii
Kakuun durii ni mi’ooftis ni qaaloftis, haala yeroo ammaa sabni keenya itti jiru yeroon taa’ee yaadu hedduu na yaaddessa.
Dhugaadha waanti hin haalamnee fi nama hin yaaddessine fakkaatu tokko; namoonni dammaqiinsa amma jiru kana akka injifannootti ilaalaniifi bu’aa qabsaa’ota keenyaati jedhan jiru.
Eeyyeen, sadarkaan dammaqiinsa uummata keenyaafi gaaffiin mirga abbaa biyyummaa bu’aa qabsaa’ota keenyaa kaaleessaa fi hardhaati waan ta’eef waan wal haallu miti. Haa ta’uutii garuu, qabsaawonni keenya kaleessaa gariin mootummaa keessa taa’anii, gariin immoo daggala keessa taa’anii kan isaan saba keenyaaf dhiigaa turan ganda ykn amantii hordofaniif quuqamanii akka hin turre beekamuu qaba.
Hardha garuu, sochii godhamu ykn ijaarumsa godhamu keessatti namni kamuu ganda kiyyarraa ykn dhaabbata amantii kiyyarraa eenyutu bakka naaf bu’ee jedhanii of keessa mil’atu. Yoo akki ani ykn isaan yaadan sun hin taane ijaarumsi sun jalqabarraa qabee ija shakkiin ilaalama waan ta’eef sakaallaa (Gaadii) jalatti kufa.
Amanamummaanis kan kennamu nama lafa dhaloota ykn dhaabbata amantaa waliin itti waaqeffatanii qofaaf luucca’aa deema. Maarree haala kanaan yoo deemne Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa, gara gaaffi mirga abbaa gandummaa ykn amantiiti jijjiiramaa deemte jechuu mitii..?
Ani kanin jedhu, silaa akka ilaalcha amantiitiifi gandummaa ykn aangoo of harkaa qabaachuutii Hajii Adam saadoo fi J/Taaddasaa Birruu maaltu walitti fida ture. Gaafa J/Taaddasaa Birruu qabamu xalayaa Baalerraa H/Adam Saaddoo fidee dhufe dabarsee otoo diinaf hin kenniin cicciree erga nyaateen booda “kan garaa kiyyaa baate garaa kiyyatti deebifadhee ( iccitiin isin argattan hinjiruu) maal fiddu” jedhan warra mootummaatiin…. Kakuun J/Taaddasaa fi H/Adam gidduu turte kakuu oromummaa mi’ooftuu ykn qaaloftuu qofa ture. Kakuun kaleessaa hedduu mi’oofti ykn qaalofti, kan hardhaa kun hedduu bushoofti ykn rakasti.
Hubachiisa J/Taaddasaa Birruu amantiindhaan Orthodox yoo ta’u H/Adam Saaddoo ammo Islaama. Garuu, kun jara kana laamaaniif waaliin hojjachuuf rakkoo hin turre sababni isaas Dhiigni bishaan irra furdaadha.Diinni uummata keenya bara baraan lolaa jiru garagarummaa gosaa fi gandaa dhabee miti garuu kaayyoo fi galmi sadarkaa sanii eenyurrayyuu guddaadha. Isan ani irraa dubbadhu kana quba hin qaban ture; dubbiin ijoon waa’ee Oromummaa qofa ture waan ta’eef. Fakkeenyaafan jara kana lamaan kaase malee heedduun kan saba isaaniif jecha jiruu qananii dhisaanii of wareegan hedduudha.
Namuu waan tokko nii beeka harraan tana Tokkoomnu malee humna hin godhannu, Irree malee hin bilisoomnu kanaafuu maaltu adda nu oofaa jira jarana yoo wayaanee hin tahin? Namni yoo dandahe diina biratti tokko tahe yoo diinni hin jirre wal wal qeequun wal adabuun waanuma jiru garuu keenya faallaadha. Wanti nama aarsu yeroo kanatti,maaliif? diinni kee kan burjaaja’ee baqachuuf ture harra yeroo argatee diina biraa sitti ijaaree simarsuuf jira. Wayyaaneen ofiif si loluuf hin jirtu saboota biroo hidhachiisutti jirti.
Silaaftuu waan diyaaspooraa Oromoo dubbachuun nama dhiba garuu uummanni biyya keessaa adaraa keessan yoo loltan waliin, waliin nyaadhaa malee wal hin nyaatinaa.yeroo bahaaf dhihaa kabaaf kibbaa sitti duulanitti daqiiqaayyuu hin qabnu wal loluuf.
kan garaa kiyyaa baate garaa kiyyatti deebifadhee.icciitiin isin argattan hinjiruu maal fiddu? Jecha Haji Adam Saaddoo diinaan jedhan yeroo qabaman
Kanaaf haala amma jirru kanaan , keessaayyuu dhaabbileen qabsoo bilisummaa oromoo yoo deebitanii of hin sakattaane gara badiitti nu oofaa jirtu.Yoo waliin dhaabbachuu hin dandeenye,diina dhiisnee namuu gandaan kan sochoonu yoo tahe bilisummaan ilmaan Oromoo dhiiga dhagalaasaniif sun akkamiin dhufa yoo bilisoomnehoo waliin turuu dandeenyaa? Kanaaf, adeemsa jiru egeree dhala oromoo maraaf jecha ilaaluutu isinirra jiraata. Ta’uu baannaan, boru bilisummaa boodas maaltu ta’uuf deema gaaffii jedhu ammumarraan of gaafannee deebisuu qabna.
Bu’uurri bilisummaa tokkummaa dha.
← Karaa gabaabaan kiiboordiitti akka itti fayyadamtu
Trump: “Rocket Man’s on suicide mission” →
October 12, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Akkaataa wayyaaneen liyyuu polisiidhaan milkoofte beektuu?
Breaking News:Abbaa Duulaa Gammadaa hojii isaanii lakkisan
October 7, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Breaking News:Abbaa Duulaa Gammadaa hojii isaanii lakkisan